Ny fivavahana sy ny fitafiana - Dinika forum.serasera.org
Ny fivavahana sy ny fitafiana
Fitohizan'ny hafatra : Re: Ny fivavahana sy ny fitafiana
Miharena - 14/02/2018 06:37
Jesosy aza tsy niteny na pitiny akory aza momba ny fitafiana. kanefa izy no iorenan'ny finoana Kristianina, fa ilay misoratena ho mpianany sy mpanara-dia azy indray no miseho mahay noho Jesosy koa angaha tsy loza e.
Ka Jesosy anie tamin'ny fotoana bola maontina ny olona no teto an-tany fa tsy amin'izao vaninandro izao e!
Mba asio lojika ihany rehefa maneho hevitra fa aza dia mamorona rehefa tsy mahita havaly hanohanana hevi-bontolo e!
Toa izany koa Rhaj0, rehefa tsy mahita havaly dia mamorona sarisary indray an!
rhaj0 - 14/02/2018 13:07
mouah ha ha... Kay mbola tsy takatr'i Miharena ilay sarin-Jesosy. Ndana ivereno dia banjino tsara ao ry Miharena aa.. Dia tandremo ho'a sao taitaitra ao ka petsa eo h@ ecran an...
Fa ity indray koa azany jereo ny olombe kristiana eee... Efa azo sary mihintsy io ny imazination-ndry Miharena.. kay toa izao no hitanareo ry Miharena rehefa miangona ao?
endriny - 14/02/2018 14:37
Ka ireto olona ireto ve izany ry Miharena tsy maontina...
Ho ahy dia ireto olona ireto no mbola tsy vokasik'izany fahotana tamin'ny fototra izany. MBola tsy mahalala ny tsara sy ny ratsy
endriny - 14/02/2018 14:39
Ka sao dia ry zareo ireo ry Miharena no atao Pasitera sy Mopera fa ry zareo tena mbola miresaka amin'Atra sy mbola vavolom-belon'Atra mivantana tsy misy mpanelanelana
Miharena - 15/02/2018 07:14
Raha mamaky Baiboly isika dia tsy ry zareo mpiaina any anaty ala nanahary tsy voakasika no niantefan'ny hafatra fa ireo izay efa nanana sivilizasiona misy fikorontanana noho ny tsy fifandraisana amin'ny Mpahary.
Efa tsy misy lalana intsony ny fomba fitafy dia io samy manao izay maha diavolana ny sainy io dia rehefa ny fanolanana ny maha-diavolana ny sasany dia io no ataony. Efa nisy anatra momba ny fitafy tamin'ny andron'ny Testamenta taloha araka ny voalaza etsy ambony. Fa na Testamenta taloha aza dia efa ahitana ireo karazana sivilizasiona maro teto an-tany voafariparitra ao.
endriny - 15/02/2018 08:01
Efa tsy misy lalana intsony ny fomba fitafy dia io samy manao izay maha diavolana ny sainy io dia rehefa ny fanolanana ny maha-diavolana ny sasany dia io no ataony.
Hoy Jesosy: Raha manafitohina anao ny tananao dia tapaho fa aleo tsy misy tanana miditra ny lanitra toa izay manana tanana very any amin'ny afobe
Ka raha tsy zakan'i Miharena I Bonbontangena raha mahita mini-mini dia tapaho fa aza ny olona no aholana.
Sa izany no mahatonga anareo Kristianina sy Mopera Manolana, tsy mahazaka mini-mini?
Miharena - 15/02/2018 09:02
Io efa voasoratra hoe lozan'izay niavian'ny fanafintohinana.
Tsy manome tsiny fahatany isika fa mametraka ihany hoe misy kosa ny fomba fiaina tokony handeha amin'ny laoniny lasa mivaona e!
Betsaka koa moa ireo olona izay tena tsy te-hahalala ny atao hoe rindran-damina izay tian'ny Mpahary ananan'ny olombelona ka io samy manao ny saim-pantany io dia manome tsiny no ataony rehefa ilazana hoe ianareo tsy manana tondro-zotram-piainana anie io voa amin'ny fanaotaovam-poana mini-mini io e!
MIhevitra manko hoe mandalo ihany ny fahatanorana ka dia manao izay hisarihana faran'izay bobaka aloha.
Ny tena manao fitafy mitanjaka anie ka ny mpivaro-tena e!
Izay milaza azy tsy ho mpivaro-tena indray anefa dia io no fiadiana voalohany hahafahany misarika sy manataka ny lehilahy aloha. Ao koa moa ny maha-zatovo izay mbola mitady vady dia manao io fomba io sao mba misy taitra ao amin'ny mpiara-mivavaka ao hono e!
Fa io mila fitaizana ihany satria rehefa tsy tian'ny olona dia lasa mivarilavo.
endriny - 15/02/2018 09:59
Mahatagotohina ve ny mini-mini? Sa ianao mihintsy no tsy maha eny tena?
Dia diso izany Jesosy nilaza hoe tapaho ....?
Aoka re ry Kristianina marina e! Hainareo ery ny mampiasa ilay baiboly ho an’ny fiarovan-tenanareo
Miharena - 15/02/2018 10:44
Sao dia tonga dia very aloha ilay lohahevitra fa tokony holazainao eto hoe aleo atao ilay mini-mini eran'izao tontolo izao fa izany no tena raitra e!
Satria raha ny fijeriko ny tianao hahatongavana dia ny hanome tsiny ny Kristianina niteny hoe tsy mety ny mini-mini fa aza entina any am-piangonana!
Iza no manana fomba fijery hafahafa amin'izany aloha?
Mba hahitsio ihany ilay fijery fa tena efa lasa mivoana Endriny a!
endriny - 15/02/2018 15:14
Aza jerena ilay olona rehefa manao mini e. Akipiho ny masonao raha tsy mahazaka Fa aza ny zanak’olona no aholana.
Sa moa izay mihintsy ilay Kristianina: Raha vao mahita zavatra tsara dia tsy mety raha tsy mpangalatra sy manimba?
Rehefa mijery tenisy ve izany ry Miharena dia tsy ny baolina no jereny fa ilay mini mikopakopaka?
rhaj0 - 16/02/2018 16:36
Ry Miharena anie efa toroina foana fa ao @ babioly ao, dia efa voasoratra hoe:
rahefa mandeha eny @ arabe, dia ny kapanao jerena ee...
Dia torak'izay koa, rehefa mijery tennis, dia mbola ny kapanao na ny tennis-nao foana ihany jerena ry Miharena le fondamentaliste aa...
Miharena - 17/02/2018 12:57
Mananatra rehefa mahita olona manao ireny fitafy tsy mendrika ireny.
Tsy ny Kristianina no hanolana anao akory fa ireo izay tsy mandaharaha ny namany fa manao ny filan'ny nofony fotsiny.
Mety ho endrika fanolanana koa anie ny fisarihana ny zatovo vavy hanao ireny mba ho tafaroboka any amin'ny fivarotan-tena e! misy ny ray aman-dreny moa dia mamporisika ny zanany hivaro-tena mihitsy dia asongadina tsara hono ny tena fa raha tsy izany tsy misy mividy.
Eo koa ireo izay mamporisika mba hahazoan'ny zanany vady hono.
Ny sasany moa dia mivoy hatrany izao atao hoe fahafahana ara-seksoaly izao dia hoe mahazo manao amin'izay olona rehetra samihafa izao ny zatovo fa tsy mila hamasinina io tena io mba tsy hanambady afa-tsy olon-tokana.
Ka aza dia manohana hevitra tsy misy fotony e! Sa mety aminareo ateista ny fahafahana seksoaly mba ahafahanareo manao izay tianareo? Izany hoe ny fivarotan-tena izany no tena idealy e! Satria io koa no mba hanaovana ireny mini-mini ireny mba hanintonana ny lehilahy. Ny mpivadika manao sarindahy sy sarimbavy moa dia manginy fotsiny etsy andaniny. Dia hindrahindraina hoe izany no tany mandroso e! mandroso amin'ny inona? Sodoma sy Gomora aza efa tsy fidiny ary efa miaina izany isika izao satria ampahany betsaka amin'ny olombelona lasa mpivaro-tena sy mivadivady samy mitovy taovam-pananahana.
Rehefa mivadi-kondana dia tokony hiteny ihany hoe izahay anie mpivadi-kondana satria ateista fa tsy anareo Kristianina no mananatra anay e! Na dia zavatra natoraly izao aza no ampianarina. Ny natoraly eto dia izay Voajanahary, nahariana azy tamin'ny voalohany fa tsy hoe izao karazana fifampitaizana ara-olombelona sy arak'i Satana devoly rehetra izao an!
endriny - 17/02/2018 17:24
Fa I Satana sy Devoly ve mba mamono olona toa an’ilay Atra ry Miharena?
Miharena - 20/02/2018 05:14
Satana Devoly dia mamono olona dia mamono olona tokoa satria tiany ho azy daholo hono izao rehetra izao dia izay olona mino an'Andriamanitra dia ezahiny vonoina amin'ny alalan'ny fitaka isan-karazany.
Andriamanitra dia nanao fandringanana ny ratsy fanahy tamin'ny fotoan'androny fa rehefa tonga Jesoa dia niova ny tantana.
Miresaka tsara anefa Andriamanitra vao manatanteraka ireny fandringanana ireny toy ny hoe ny fahotanareo no efitra mampisaraka Amiko anareo. Rehefa manompo sampy sy manao zava-betaveta dia voaringana tamin'izany.
Raha raisina ara-panahy indray ilay izy dia toy izao : Andriamanitra dia Fanahy ary isika olombelona dia sombin'ny AINY.
Sombin'ny Ainy koa Satana taloha fa rehefa nivadika dia lasa manohitra Azy ka noroahiny tsy afa-miara-miaina AMINY ao an-danitra intsony. Dia io eto ambonin'ny tany io izy amin'izao vaninandro misy antsika izao manao izay ho afany hamongorana ny Voarin'Andriamanitra.
Ny olona aminy dia tsy mba hoe maka namana fa maka hamongotra satria fantany fa tsy izy no nahary fa mandrombaka fotsiny no ataony.
endriny - 20/02/2018 16:23
Tao anaty bilobiloka biblika indray ve no nisy Satana sy Devoly namono olona?
Fa iza aloha no nanozona ny olona sy ny tarany ho faty e? Tsy ilay Atrareo ve e?
Dia nampihesoniny indray ianareo hoe: Ho tonga ny famonjena... kay ianareo mbola maty mitovy aminay ihany
Dia any an-danitra hono ny valisoanareo e... kanefa efa voalaza fa ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Raha tsy hoe mandainga I Jesosy
Miharena - 21/02/2018 08:57
Mba vakio aloha ny tantara vao miteny hoe iza no namono olona. ILAY niteny hoe aza hihinanareo io hazo io fa ho faty ianareo sa ilay niteny hoe hihinano fa tsy mahafaty io?
Aza manao hevi-dravina Endriny fa hoatry ny mampihomehy a!
rhaj0 - 21/02/2018 12:57
Nanontany an' Ineny Gogola, dia hoz'izy:
- Sarah, wife of Abraham... (Reference: church tradition)
- Job's wife, children, and servants (who were possibly slaves)... (Reference: Job 1:13-22)
- 20 million (estimated)... (Reference: Genesis 6:7)
- 185,000 - Assyrian soldiers killed while sleeping... (Reference: 2 Kings 19:35)
- ... There is more folks, a lot more... :-(
endriny - 21/02/2018 15:20
Ny ao anaty baiboly dia lamaody tamin'ny andron'i Jesosy sy Magdalena... tamin'ny andron'ny mbola tsy nisy zipo sy silipo ary elastika.
Ka ny mahagaga anefa dia ry zareo kristianina lasa manao palitao sy pataloha ry kiravaty: Izay fomba fitafin'ny Tatsinanana avokoa.
Fa maninona raha mitana ny fomba fitafy voalava ao anaty baiboly aza e?, Satria izay hoy ry Paoly no fitafy maontina sy mifanaraka amin'ny jerin'Atra.
Ahahahha. lasa daholo izany manao rebareba tsy mikilaoty...
rhaj0 - 21/02/2018 19:28
mouah ha ha... Tsy izany "robe rebareba tsisy kilaoty" izany akoriny aza no akanjo raha ny tokony ho izy, fa ravim-boaloboka no tena orizinal. Ary izany dia voasoratra ao anaty BAbioly mihintsy!!
Dia satria tsy orizinal ao dago ny voaloboka, dia tokony ravim-boatavo izany no ahantona eo ho an'ny gasy fondamentaliste.
Ilay masaisay @ itiavan'i Miharena azy mihintsy moa izany ooo??
Miharena - 22/02/2018 05:58
Mbola maro ieo maty tamin'ny safodrano f'angaha izay ihany?
Ireo izay velona ka nanota dia noringanina ihany koa tamin'izany andro izany.
Fa amin'izao fotoana izao, heverinareo ve fa tsy ho ringana izay adaladala rehetra? Sa manantena hisonanika rehefa tonga ny fotoana hitafiana ny tsy mety lo hoe rehefa tonga Jesoa hanontany hoe inona no mba azonao lazaina alohan'ny hanapahana hevitra hoe aiza no hisy anao, dia hipingapinga hamaly hoe ao amin'io toerana mahafinaritra io Tompoko! Dia homeny anao mpanda AZY ve izany?
Ianao aza raha lazaina hoe Jehovah no Rainao olombelona rehetra dia manda nefa tsy niaina talohaNY akory nahita hoe ahoana no namoronana anao sy nampitomboana anao olombelona.